Sidee inuu ka soo kabsado Messages tirtiray ka Android Phones
Sidee inuu ka soo kabsado Messages tirtiray ka Android
Yaa ma laha kuwa daqiiqado markii hal natiijada tuubada qaldo in tirtirka qiimo nolol ee fariimaha qoraalka ah? Waxaan oo dhan ayaa ah dhibanayaasha qasabadaha dhigo sida ugu yaraan hal mar nolosheena. Si kastaba ha ahaatee Waxa ugu wanaagsan, waa in ay macquul tahay inuu ka soo kabsado fariimaha tirtiray ka android. Telefoonada Android lagu qorsheeyay si ay u sidoo kale ku kaydiyaan oo ka mid ah macluumaadka la tirtiro. Xogta waxaa laga heli karaa iyadoo la isticmaalayo Softwares wax kaqabashada xogta ay shardi tahay in aan la qoray u gal. Waxaa jira barnaamijyadooda badan oo laga heli karaa Google Play ujeeddo ah kuwaas oo qaarkood waa bilaash, qaar kalena waxay bixisay.
Sidoo kale, wax badan oo ka mid ah codsiyada desktop u muuqdaan ilaa si ay u muujiyaan marka aad samayn raadinta Google ku weydiineysa software kabashada fariin u Android. Waxa muhiim ah in aad si kastaba ha ahaatee xusuusan yahay, ma dhammaan codsiyada sida shaqeeyaan iyo qaar ka mid ah waa hoaxes Diintooda in aad soo jiidato galay lagala ka dibna qaadsiin aad laptop ama android ama labadaba. Si looga fogaado ku dhacaan dabinka sida, had iyo jeer raadiyo dib u eegista on software in si gaar ah in aad ku saabsan in ay isticmaalaan oo ay sameeyaan qaar ka mid ah raadinta asal yihiin. Waxaa had iyo jeer lagula talinayaa in aad la isticmaalo codsi kalsoon shirkadda oo magdhow si nidaamka gabi ahaanba waa aamin oo xasiloon.
Isagoo ka hadlayay ee Softwares lagu kalsoonaan karo soo kabashada xogta, Wondershare Dr.Fone for Android (Android Data Recovery) waa mid ka mid ah nooc ka mid ah, oo dhan ee hal xogta soo kabsado software oo awood user inuu ka soo kabsado nooc kasta oo xog tirtiray dhow goobtii. Waxaa loo adeegsan karaa inuu ka soo kabsado farriimaha qoraalka la tirtiray, sawiro, dokumentiyo, xiriirada iyo wax ka badan. Waxa aanu u baahan yihiin dadka isticmaala ay u galaan badan oo farsamo ama waqti badan qaadan ka mid caadi ah. Waxa keliya weydiiyo click ah ka dibna waxay qaadataa daryeelka ee geedi socodka soo kabashada oo dhan xogta laftiisa. Wondershare Dr.Fone U Android waa la jaan qaada labada Windows iyo Mac ka hawlgala nidaamyada. Waxaa intaa dheer, waxay bixisaa taageero muddo ka badan 2000 lagu daydo qalab Android.
Tutorial Sidee inuu ka soo kabsado fariimaha qoraalka tirtiraa Android
Tallaabada 1 Connect telefoonka aad Android
First of dhan, dejisan iyo rakibi qalabka kabashada text Android on your computer. Ma ahan app ah Waa qalab desktop ah. xirmaan telefoonka aad Android inay kombiyuutarka.
Tallaabada 2 sahlo debugging USB qalabka Android
Hubi in aad karti debugging USB. Haddii aan, raacna Jidka hoos ku qoran si ay u gudato.
1) Android 2.3 ama ka hor, "Settings" jaftaa> guji "Codsiyada"> guji "Development"> hubiyo "debugging USB"
2) Android 3.0 in 4.1: jaftaa "Settings"> guji "Developer fursadaha"> hubiyo "USB debugging "
3) Wixii Android 4.2 ama cusub, ka jaftaa "Settings"> guji "About Phone"> tuubada "Dhis tirada" dhowr jeer ilaa helo qoraal ah "in aad ka yar tahay hab sameeysa"> Back to "Settings"> guji "Developer fursadaha "> hubiyo" debugging USB ".
Tallaabada 3 Falanqeeyaan telefoonka aad Android
Ka dib dejinta debugging USB ah, xiriirkana usoo celiyaan telefoonka haddii aad ka codsaday in barkinta inta lagu guda jiro samaynta. Markaas waxaad heli doontaa suuqa kala hoose. Halkan waxa aad u baahan tahay si ay u hubiyaan batari aad telefoonka ee ma aha wax ka yar 20% soo eedeeyay, ka dibna waxaad riixi kartaa "Start" si aynu barnaamijka falanqeeyaan telefoonka aad Android.
Tallaabada 4 Scan ceshan SMS tirtiray on Android
Ka dib markii la falanqeeyo aad Android, waxaad bilaabi kartaa waa in hadda laga baarayo. Ka hor waxa ay samaynayaan, si ay u soo jeesan screen guriga aad telefoon oo guji "ogolow" it on. Markaas dib ugu barnaamijka on your computer oo guji "Start" si ay u bilaabaan iskaanka. Marka scan ay ka badan tahay, oo dhan recoverable fariimaha, xiriirada, sawiro iyo video on your Android waxaa laga heli doonaa oo soo bandhigay natiijada baaritaan. Waxaad ku eegaan karaa fariin kasta, oo ay ku jiraan SMS iyo taariikhda chat WhatsApp. Hubi Farriinta tirtiray aad u baahan tahay oo u dhoofin si aad u computer adigoo gujinaya "Ladnaansho".
Video Tutorial: Sidee inuu ka soo kabsado fariimaha qoraalka tirtiraa Android
Talooyin: Marna Messages dabacsan ee Android
Backing ilaa fariimaha Android la kaabta SMS +
1. kaabta SMS + waa fariin gurmad app lacag la'aan ah laga helayaa Google Play. Waxaa lagala soo bixi karaa https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zegoggles.smssync&hl=en .
2. Marka qalab lagu sameeyo rakibidda, screen ugu horeysay in ay la yimaadaan la mid noqon doontaa mid ka mid ah hoos ayaa lagu muujiyey.
3. Hubi in checkbox u dhiganta "Connect" doorasho ayaa lagu hubiyaa sida app waxay u baahan tahay in ay helaan sax ah Gmail akoonka in ay dib u farriimaha si aad u. Markii ugu horeysay ayaa waxaa laguu keenay in doonaa helitaanka ogolaansho. Ogolaato in ay sii wadaan.
4. Farriin pop-up doonaa weydiinaya in aad u ogolaato ama boodi gurmad ugu horeysay. Dooro "kaabta" in ay farriimo aad u taageeray in aad xisaabta Gmail oo dhan.
Backing ilaa fariimaha Android la MobileGo Wondershare
Si aad u billowdo taageerto ilaa xogta adiga oo isticmaalaya Wondershare MobileGo , sii wado sida hoos ku faray:
1. Download Wondershare MobileGo ka http://mobilego.wondershare.com/ oo ku xidh si aad laptop ama computer. Marka la rakibo waa la bilaabay dhamaystiran software ah. Connect qalab android aad si aad laptop ama computer taasi oo ka cable USB ah. Dooro "kaabta One-click" ka screen guriga.
2. suuqa kala A muuqan doonaa muujinaya waxyaabaha file gurmad ah. Hubi ama uncheck waxyaabaha ku salaysan doorashadaada. Dooro meel u gurmad iyo dooro "dib".
3. ula socdaan horumarka aad gurmad by in isha lagu hayo suuqa kala socda in u muuqataa.
Sidee inuu ka soo kabsado Photos tirtiray ka Android
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Faylal ay ka Android
> Resource > Android > Easy hab inuu ka soo kabsado Messages tirtiray ka Android Phones